Covid ကာကွယ်ဆေးထိုးမယ့်သူတွေ ဘာတွေသိထားသင့်သလဲ ….? - Myanmarload
Covid ကာကွယ်ဆေးထိုးမယ့်သူတွေ ဘာတွေသိထားသင့်သလဲ ….?
လွန်ခဲ့သော ၁၁ နေ့ က 15:58 September 10, 2021
အခုအချိန်အထိ ကမ္ဘာ အရပ်ရပ်မှာ Covid-19 က ဖြစ်ပွားနေဆဲ ဖြစ်သလို သေဆုံးမှုတွေကလည်း ရှိနေဆဲပါ။ ဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာမှာလဲ Covid-19 ကာကွယ်ဆေး အပါအဝင် Covid-19 ကို ကာကွယ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းတွေကို ရှာဖွေမှုတွေ လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
ရလဒ်အနေနဲ့ Covid-19 ကာကွယ်ဆေးတွေကလည်း ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ အချို့မှာ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီး စတင် ထိုးနှံမှုတွေကိုလည်း လုပ်ဆောင်နေကြပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတော့ Covid ကာကွယ်ဆေးထိုးမယ့်သူတွေ သိထားသင့်တဲ့အချက်လေးတွေကို ဖော်ပြပေးပါ့မယ်။
ကာကွယ်ဆေးထိုးထားတဲ့သူအတွက် ပြင်းထန်တဲ့ ကိုဗစ်ရောဂါ မဖြစ်အောင်လည်း ကာကွယ်ပေးတယ်၊ ကာကွယ်ဆေး တော်တော်များများက ရောဂါတွေကို ကာကွယ်ပေးတယ်။ကိုယ့်ကို ကာကွယ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် ကိုယ့်အနားမှာရှိတဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ၊ ထိလွယ်ရှလွယ်တဲ့ သူတွေ၊ ရောဂါ အခံ ရှိတဲ့သူတွေကိုလည်းပဲ ကိုယ့်ဆီကနေတဆင့် ကိုဗစ်ရောဂါ မကူးအောင် ကာကွယ်တဲ့အတွက် ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးက ထိုးသင့်ပါတယ်။
Covid-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပြီး သူအများစုက
· ကိုယ်ပူခြင်း၊ ဖျားခြင်း၊ မအီမသာဖြစ်ခြင်း၊ ချမ်းတုန်ခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း နဲ့ ခြေကုန်လက်ပမ်းကျခြင်း တို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
· ဆေးထိုးထားတဲ့နေရာမှာ နာခြင်း၊ အဖုထခြင်း၊ရောင်ရမ်းခြင်းမျိူးတွေ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
ကာကွယ်ဆေးကို ဘယ်လိုလူတွေ မထိုးသင့်ဘူးလဲ …..
· ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါ အစားထိုးကုသမှု ခံယူထားသူ၊ ကာကွယ်ဆေးနဲ့ ဓာတ်မတည့် ဖြစ်သူတွေ
· သွေးမတိတ်ရောဂါရှိတဲ့သူတွေ၊ သွေးကျဲဆေးသောက်နေရတဲ့သူတွေ
· ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်တွေ နဲ့ နို့တိုက် မိခင်တွေ၊ အသက် ၁၈ နှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေ
· နာတာရှည်ရောဂါ ခံစားနေရသူတွေကတော့ ဆရာဝန်နဲ့ သေချာတိုင်ပင်ပြီးမှ ကာကွယ်ဆေးထိုးသင့်ပါတယ်။
· ဓာတ်မတည့်တာတွေ ဖြစ်နိုင်တာကြောင့် ဆေးထိုးပြီးပြီးချင်း တန်းမပြန်ပါဘဲ အနည်းဆုံး ၁၅မိနစ်၊ မိနစ် ၃၀ လောက် ဓာတ်တည့်မတည့်ကို စောင့်ကြည့်သင့်ပါတယ်။
ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးအပြီးမှာ ဘာတွေလုပ်ဆောင်သင့်လဲ ?
· ကာကွယ်ဆေးဘေးထွက်ဆိုးကျိူးတွေဖြစ်တဲ့ ရောင်ရမ်းတာ၊ နာတာတာတွေ ဖြစ်လာရင် ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတာကို ဆရာဝန်ကို ကြိုမေးထားပါ။
· နောက်တစ်ကြိမ် ဘယ်နေ့ထပ်ထိုးရမလဲဆိုတာကို သေချာမေးမြန်းပြီးတော့ ကာကွယ်ဆေးထိုးကတ်ကို ပြန်ယူလာဖို့ မမေ့ပါနဲ့။